Manimba ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Alahady 8 Febroary 2015 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Efa nanao fahadisoana ve ianao tamin'ny media sosialy? Betsaka ny vitako (ary manohy manao azy ireo). Tsy blaogy goavambe, fa kosa tsy manjaka. Nanao fanehoan-kevitra tsy misy dikany aho izay azo sorohina. Notsikeraiko ny olona fa hajaiko ka heverin'izy ireo fa volo loha aho. Mizara politika aho - ny fotony masin'ny blaogy sosialy. Izaho koa mampifangaro ny orinasa sy ny fahafinaretana mandritra ny kaontiko orinasa sy manokana.
Tsy maintsy minono amin'ny media sosialy aho.
Mety hieritreritra ianao… fa manana namana ara-pahasalamana manaraka sy vao niforona sy fifandraisana eo amin'ny orinasa isan'andro aho. Isaky ny mpanolo-tsaina, izaho manao ny tsy mety rehetra… Fa mandeha io. Ary na olon-tsy fantatra aza, ny paikady izay Highbridge ny deploys ho an'ny orinasa dia mamorona famerenam-bola azo antoka amin'ny famatsiam-bola. Zavatra tsy halan'ny mpanolo-tsaina media sosialy sasany.
Nanoratra momba izany aho mangarahara mifanohitra amin'ny maha-azo itokiana ka tsy hikapoka soavaly maty eto aho (uh-oh… aza miantso PETA). Saingy sosotra tanteraka aho rehefa mahita consultant media sosialy mitondra orinasa amin'ny asany noho ny hadisoana tsy nahy.
Ny lozisialy farany indrindra dia ny Coca-Cola. Namorona bot Twitter ho azy ireo izy ireo #MakeItHappy fanentanana, manazava ny tanjony tamin'ny fanambarana an-gazety:
Fehezo ny negativa be fandotoana mandoto ny fahana haino aman-jery sosialy sy kofehy maneho hevitra manerana ny internet
Wow… orinasa manandrana mitondra fahasambarana kely amin'izao tontolo izao. Azo antoka fa fanatanjahan-tena marika izany ka misy ny fihodinana kely eo aminy. Saingy io no paikadin'ny marika Coke nandritra ny am-polony taona maro… ho hita eo izay misy fahatsiarovana tsara. Mahatsiravina tokoa, sa tsy izany?
I Adam Pash an'i Gawker, dia namorona bot Twitter handefa bitsika avy amin'i Mein Kampf an'i Adolf Hitler ary hampifandray azy ireo miaraka amin'ny tag #MakeItHappy. Nahomby ilay tetika. Nahatonga ny botan'i Coca-Cola handefa ny lahatsoratr'i Hitler ary hamoaka sary mahafatifaty miaraka amin'ny tag #MakeItHappy mandritra ny ora roa.
Gawker dia nandefa ny stunt ary tian'ny Internet izany. Coke dia nidina ny bot.
Inona no nitranga avy eo? Ny paikady media sosialy dia nikapoka an'i Coca-Cola noho ny hadisoana nataony tamin'ny media sosialy. Novakiako izany nandritra ny famahanako - izay feno namana sy mpiara-miasa amiko izay mijery ny orinasa amin'ny paikadin'ny media sosialy. Mikaroha amin'ny #MakeItHappy sy Twitter dia ho hitanao ny tiako holazaina. Tena mafy… nokapohin'izy ireo.
Herintaona lasa izay, nanao famelabelarana tao amin'ny Social Media Marketing World aho izay nitanisako ny fahadisoana lehibe nataon'ny haino aman-jery sosialy voatanisa tamin'ny tranokalan'ny indostria ary noporofoiko fa tsy nisy na dia iray aza nisy fiantraikany maharitra tamin'ny marika. Matotra - tsy iray akory!
Matahotra be ny orinasa noho ny lesoka media sosialy. Fantatrao ve ny antony atahoran'izy ireo ny lesoka amin'ny media sosialy? Satria ny mpanolotsaina media sosialy rehetra any, dia manohitra ny mpiasa ao aminy ary mamantatra ny paikady rehetra apetrak'izy ireo izay miafara amin'ny hadisoana. Tsy ny valin'ny fampielezan-kevitra no nandratra ny lazan'ilay orinasa, fa ny gazety novokarin'ny mpanolotsaina media sosialy mba hahamenatra ny zava-bitan'izy ireo.
Tsy nanao na inona na inona i Coca-Cola ratsy miaraka amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo bot Twitter izay mendrika ny fihetsika nasetrin'ireo mpanaraka. Raha te handray olona amin'ny lahasa ianao, dia ento mankany amin'ny laharana i Gawker. IMO, Adam Pash dia dokotera noho ny fanararaotana tamim-pifaliana ny fampielezan-kevitra ary i Gawker dia nirehareha momba izany mba hahafahan'izy ireo milalao gotcha toy ny andian-jatovo vao manomboka. Azoko an-tsaina fotsiny hoe mihomehy izy ireo satria ny tsonga voalohany nataon'i Hitler dia tonga tao amin'ny feed Twitter an'i Coke.
Hey Gawker… mihalehibe.
Ny toro-hevitro ho an'ny orinasa
Fotoana izao hanaovanao izao fanafintohinana izao. Arovy ny marikao, amboary ny paikadinao ary mandrosoa. Ny fanovana mahavariana amin'ny marketing sy haino aman-jery sosialy izay dia ny fahafahantsika mifandray mivantana amin'ny marika. Izao tontolo izao dia mangataka ny hisian'ny mangarahara sy ny fijerena ao anaty ireo fikambanana iarahany miasa mba hahafahan'izy ireo mahatsapa tsara fa mendrika ny vola laniny. Miaraka amin'ny mangarahara anefa, mety hisy ny loza. Hanao fahadisoana ianao. Ary tsy maninona!
Tsy afaka maminavina ianao fa misy dick sasany hanenjika ny fampielezan-kevitrao amin'ny serasera sosialy miaraka amin'i Hitler na dia miezaka mafy toy inona aza ianao. Ny hoe mangarahara dia midika hoe mora tohina amin'ny toe-javatra toy izao ianao, fa rehefa namorona paikady hanatanterahana ny fampielezan-kevitra ianao dia afaka mamorona paikady raha sendra misy tsy mety.
Tiako ny hahita valiny ampahibemaso avy amin'i Coke izay nilaza tamin'izao tontolo izao fa ny fihetsik'i Gawker no fihetsika izay ezahan'ny ekipan'izy ireo resy. Haneho ny alaheloko aho fa misy orinasam-baovao mandeha amin'ny toerana ambany toy izany mba hahamenatra marika iray. Hala ny fampielezan-kevitra aho ary hangataka amin'ny olona hanoratra Gawker ary haneho ny fahadisoam-panantenany ihany koa.
Misy lesoka amin'ny media sosialy Azon'ny orinasa atao ny misoroka, saingy ny tsy fandosirana ny hatezeran'ny adala amin'ny Internet dia tsy iray amin'izany.
Ny torohevitro ho an'ny vola ara-tsosialy
Rehefa mitondra marika amin'ny lahasa toy izao ianao dia manimba ny orinasanao manokana. Tsy manampy anao ny fampitahoranao sy ny fanambarana nataonao momba ny fanimbana ny marika. Mandeha hatrany ny orinasan'ny orinasa hiala amin'ny mangarahara ary miverina miafina ao ambadiky ny logo, ny teny filamatra ary ny marketing tokana.
Raha marika lehibe aho dia tsy azoko antoka raha hiara-miasa amin'ny mpanolo-tsaina media sosialy aho izay nitsambikina tamin'ny lalana mba hampahamenatra orinasa an-tserasera. Miasa ny haino aman-jery sosialy ny orinasa tsara indrindra dia mahazo aina amin'ny fifampiresahana amin'ny be sy ny maro, fa tsy rehefa hipetraka ao amin'ny efitrano filanonana izy ireo ary milalao ny ankanavaka noho ny tahotra ny lahatsoratra bilaogy manaraka izay hosoratanao rehefa misy ny tsy mety. Ajanony io.
Atsaharo ny fivarotana ny serivisinao amin'ny tahotra ary mivarotra, kosa, amin'ny fampanantenan'ny fomba hanovan'ny orinasa ny marika sy hananganana vondrom-piarahamonina miaraka amin'ny mpanjifany.
Tags: Adam Pashcoca ColaCokegawkermakeithappympanolo-tsaina amin'ny media sosialylesoka amin'ny media sosialympiorina amin'ny media sosialybot bot
Torolàlana farany hanaraha-maso ny laza nataonao amin'ny Internet
9 Feb 2015 tamin'ny 9:55 maraina
Miombon-kevitra tanteraka aminao eto. Ny Gawker dia ilay mpitsikilo fa tsy Coke. Mazava ho azy fa mety ho sazy ho azy ny miasa ho an'ny Gawker.
9 Feb 2015 tamin'ny 11:09 maraina
Lahatsoratra lehibe. Tiako ilay sary — ny zavatra rehetra tokony hifandraisan'ny ampahany fanampiny amin'ny fiantohana tsy misy teny voasoratra. Bravo.
Miahiahy aho fa ny iray amin'ireo fanamby amin'ny media sosialy dia ny fizarazarana, izany hoe misy ny varotra, ny teknolojia, ny famolavolana, ny fanoratana kopia, sy ny sisa; ireo singa tsy mitovy rehetra amin'ny fifandraisana eo amin'ny fiaraha-monina informatika amin'ny fahazazany.
Ny fanentanana Coke dia manolotra paradigma mahaliana, saingy amin'ny maha-olona manao satroka be loatra amin'ny sehatry ny fifandraisana, anisan'izany ny teknolojian'ny mponina, dia afaka manaporofo ny zava-misy tsotra iray aho rehefa miady amin'ny bibidia mavesatra amin'ny media sosialy: na oviana na oviana, na oviana na oviana ny fifandraisanao ho azy. asa fampielezan-kevitra. Mamela azy ireo misokatra ianao. Io no mitovy nomerika amin'ny fandehanana any amin'ny ady tsy misy akanjo fiarovan-balan'ny bala — ho ambony ny taham-pahafatesana raha manana olona ambony ianao. Aterineto ihany izany: Anonymous, Tafika Elektronika Syriana, Lizard Squad, vondrona mpijirika rehetra izay mikendry ny fifandraisan'ny orinasa. Ity iray ity dia avy amin'ny fanahy ratsy ao amin'ny Gawker.
Ary avy eo, mazava ho azy, misy ny fiasco amin'ny media sosialy Bill Cosby. Wow.
Ny fanakianana azy ireo anefa dia mitovy amin'ny fanomezan-tsiny ny alika ho niditra tao amin'ny dabam-pako an-dakozia: toetrany izany. Ary raha avelanao hiala ny sarom-bilany, tsara - indrisy (ary ny tiako holazaina amin-kitsimpo - tsy tokony ho toy izany, fa izany no izy), izay no azonao: korontana. Na izany aza, fanabeazana daholo izany. Rehefa fantatrao ny toetran'ny zavatra iray, dia azo inoana fa ho azonao tsara kokoa ny fomba hiatrehana izany amin'ny ho avy. Angamba tsara kokoa ny mamehy ny fampielezan-kevitra amin'ny akanjo tsy misy bala (mba hilazana ny fanoharana) ary fehezina miaraka amin'ny olombelona (mazava ho azy fa matetika misy olana amin'ny mpiasa ao anatiny).
Wicket mipetaka, ity fantsona ity. Mamela fisokafana ary ho hitanao haingana fa misy olona manana bala nomerika misy ny anaran'ny marika iray, olona iray maty tamin'ny Internet, tantara fampitandremana hafa momba ny fifandraisana.
Misaotra noho ny nahatonga ahy handinika ireo geometrika hafa amin'ity toe-javatra ity miaraka amin'ny lahatsoratrao.
Febroary 9, 2015 amin'ny 1:41 PM
Lahatsoratra mahafinaritra! Misaotra!
Febroary 9, 2015 amin'ny 2:10 PM
Tena mamelombelona tokoa izany - wow! #ShameonYaGawker
Marina fa na dia manohana ny hasin'ny maha-azo itokiana sy ny mangarahara aza ireo mpampianatra media sosialy, dia manohitra mafy ny lohahevitra rehetra izay mampiady hevitra amin'ny ampahany aza izy ireo – Fantatro fa miala amin'ny olana toy izany aho, koa misaotra ny olona toa anao noho ny fijoroanao amin'izay inoanao # FIFAMIHINANA
Febroary 9, 2015 amin'ny 5:00 PM
Lahatsoratra tsara, mahaliana ahy ny mahita ny hevitrao momba ity fanampiana kely avy amin'i Gawker ity.
Febroary 9, 2015 amin'ny 8:12 PM
Heveriko fa marika ratsy tsy namanao i Gawker. 🙂